Dukaamada Android badan oo data soo jeeda, taas oo saacado dheeraad ah qaadan kartaa ilaa meel weyn qalabka aad. Waa in aad iyaga kala cadeeyo. Waxaa jira dhawr nooc oo ah xogta sida khasnado, sabuurad, diiwaanka download, tabs furan, iyo faylasha kale. Mid kasta oo ka mid ah noocyada kuwaas oo la waayay karaa tallaabooyin yar oo sahlan.
Qaybta 1. Sida loo kala cadeeyo in la bixin kari Android
Android kuu ogolaanaya in aad kala cadeeyo la bixin kari midig ka Tababaraha codsiga. La bixin kari yihiin app in furay ama sameeya shaqo gaar ah. Waxay si toos ah u abuurtaan markii falalka qaar ka mid ah waxaa looga baahan yahay ka dhamaadka. Halkan waxa ku jira tallaabooyin ay ku kala cadeeyo in la bixin kari Android.
n Markasta oo aad rabto in aad kala cadeeyo la bixin kari ka, kaliya furo goobaha, oo taga si barnaamijyadooda.
Raadi app, oo aadan rabin bilaabay sidii default. Xitaa ka hor inta aadan bilaabin talaabooyinkan loo hubiyo kuwaas oo app aad ka saareen sida default. Waxaad mari kartaa midig ama bidix si ay u kala bedesho liiska app ee Chine soo bixi, oo dhan laga daadiyo ama barnaamijyadooda socda ee.
Hadda, garaac app si ay u tagaan oo ay u info App. Scroll in la helo "Default Clear" button. Just nooca ku yaal iyo default in loo ogolaaday.
Qaybta 2. Sida loo kala cadeeyo sabuurad ka Android
Mar kasta oo aad nuqul oo wax ku qalab aad paste, nuqul la badbaadiyey on sabuurad. Xogta sabuurad Tani fasaxo by nadiifinta khasnado ee app. La baneeyo khasnado kasta waa wax fudud oo la samayn karaa laga bilaabo goobta. Halkan waxaa ku qoran tallaabooyinka ay kuu raaci kari waayay:
Fur goobaha ku saabsan telefoonka ama kiniin ah oo taga si barnaamijyadooda.
Scroll liiska app si aad u ogaato app.
Tubada on app in la furo info App ah. Waxaa jira, waxa aad ka arki kartaa macluumaad kala duwan oo ku saabsan app - ha isku dhibin, kaliya diirada waxa muhiim ah in aad. Waxaad sidoo kale waa karaa waxa size ee Cache. Si aad kayd ah, garaac Cache ee Cad.
Qaybta 3. Sida loo kala cadeeyo record download ka Android ah?
Mar kasta oo aad ka soo dejisan wax, download waxaa lagu diiwaangeliyaa qalabka Android aad. Haddii aad rabto in aad tirtirto taariikhda download iyo ma file ka soo dejisan, waxaa la samayn karaa. Waxaad isticmaali kartaa Files My ka app, kaas oo la preloaded on Android. Taariikhda Banaynta ma tirtiri doonaa faylka laakiin alwaax kaliya ee hawlaha download. Halkan waxa ku jira talaabooyin fudud u soo degsado taariikhda:
Wuxuu furaa app My Files oo taga si History Download ku. Dhamaan rikoorka download of app internetka waxaa laga heli karaa.
Hadda liiska faylasha aad soo bixi laga heli doonaa in aad. Tuubada dheer ee file download siin doonaa fursado yar oo kaliya dooro icon ku tirtirto. Tani tirtiri doonaa taariikhda. Waxa kale oo aad tirtiri kartaa files kala duwan by tuubada dheer oo ku saabsan mid ka mid file iyo tuubada ka dibna hal kale.
Qaybta 4. Sida loo xiro on Android tabs
Haddii aad isticmaalayso browser kale chrome ama qalabka android aad, aad u la shaqeeyaan tabs kala duwan. Mararka qaar waxaa dhici karta in dadku isha iyo aad hor joogsan kara Author waayo-aragnimo. Sidaa darteed, waa in aad iyaga la xiro. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira siyaabo kala duwan in ay xirto isha ku saabsan telefoonada Android iyo kiniiniyada. Xitaa qoraalkii android kala duwan leeyihiin functionalities kala duwan. Halkan waxa ku jira siyaabaha aad xirto karaa versions android kala duwan iyo qalabka tabs:
Phones isticmaalaya 4.4 Android ama ka hooseeya
Marka aad isticmaalaysid Chrome la tirada furan tabs, ee geeska midig jiro icon in tirada tab furan. Tubada si aad u aragto tabs iyo tab kasta waxa uu leeyahay "X" fudud ee geeska midig. Just taaban in ay xirto tab ah.
2. Android 5 ama ka badan
Dhinaca geeska hoose ee midigta ah ee shaashadda, waxaa laga yaabaa inaad icon switcher tab ah, taas oo u eg square. Just ka jaftaa si aad u aragto tabs furan. Just mari tagay in ay xirto tab ama tuubada on "X" in ay xirto tab ah.
Tabs Xidhitaanka looxa
Sida aad xirto isha ku computer, Oo looxa kale oo uu leeyahay isla shaqeynayaan. Tab kasta wuxuu leeyahay cross calaamad on geeska ah tab kasta. Tubada waxa ku in ay xirto tab ah.
Sida loo kala cadeeyo meel on Android? Si loo cadeeyo meel aad Android jiro mid xal, oo aad isticmaali karto. Waa WonderShare ee MobileGo. Isticmaalka software fudud waxa aad nadiifin kartaa qalab aad si sahlan.
Halkan waxa ku jira qaababka ay:
Waxaad u maamuli kartaa files mid dillaac fudud.
Utilities Your mobile sida xiriirada nuqul, qalabka bedesheen, app ururinta, raad raac iyo soo celin iwm loo maarayn karaa iyadoo la isticmaalayo software this.
Astaamaha sareeya kuu ogolaanaya in aad ka bogsato files tirtiray, kordhin shaqeynta qalabka iyo hagaajin bannaan.
Waxay la shaqeeyaan qalabka oo dhan.
Qaybta 5. Sida loo kala cadeeyo meel on Android
Si loo cadeeyo meel aad Android jiro mid xal, oo aad isticmaali karto. Waa WonderShare ee MobileGo. Isticmaalka software fudud waxa aad nadiifin kartaa qalab aad si sahlan. Halkan waxa ku jira qaababka ay:
Waxaa safaysaa RAM, dilaaga hawsha, app boost, iyo nadiifin doonaa xogta junk telefoonka.
App qaadataa ilaa ilaha ugu yar ee aad telefoonka.
Waxaad aad marna masixi karin warbaahinta iyo faylasha kale badan oo ka app.
Waxaad aad maamuli kartaa barnaamijyadooda si fudud la isticmaalayo qalab this
Waa sidan sidii aad u isticmaali kartaa Mobile tagaan meel cad oo ku saabsan qalabka aad:
Burcad app ku saabsan telefoonka. Marka hore u tagtaa nadiifsan Phone. Waxaa si toos ah uu baaritaanku nidaamka khasnado, app khasnado, diiwaanka gaarka ah iyo faylasha kale junk. Just ka jaftaa waxa faylka si aad u nadiifiso.
2. Haddaba tag bogga guriga mar kale. Kaadhkaaga ka tagay ay ka soo baxdo fursad u horumarsan. Halkaas waxaa ku socda si loo badbaadiyo doorasho meel.
3. Waxaa furi doonaa daaha cusub, taas oo muujinaysa files kala duwan ee aad taleefan in uu leeyahay size file weyn. Waxaad dooran kartaa si gaar ah iyo tirto faylasha.
Sidaas, waxaad noqon doontaa cad xogta aan loo baahnayn oo aad nafaha bannaan qaar ka mid ah.
Way fududahay in la kala cadeeyo xogta laga telefoonka aad Android. Waxaad isku dayi kartaa in aad samaysid ku lengthier ama isticmaal uun Wondershare. Iyadoo Wondershare, xogta nadiifinta waxaa la samayn karaa in qasabno yar oo aad hubto in ay u jecel yihiin.
> Resource > Clean-up > Banaynta Xogta laga Phones Android oo Kiniiniga - Jidka Easy ayaa